मोबाइलमा कसरी युट्युव भिडियो डाउनलोड गर्ने ?
अर्थसंसार काठमाडौँ – के तपाई आफ्नो मोबाइलमा युट्युव भिडियो डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ ? चाहनुहुन्छ भने अपनाउनुस यी तरिका । ...
क्यान इन्फोटेक २ लाखले गरे अबलोकन
अर्थ संसार काठमाडौं– भृकुटीमण्डपमा जारी ‘सुबिसु क्यान ईन्फोटेक २०१७’ को चौथौ दिन आइतबार ६७ हजार ३ सय ८ जनाले अवलोकन गरेका छन् । मेलामा अहिलेसम्म २ लाख ७ हजार ५८ जनाले अवलोकन गरिसकेको आयोजकको दावी छ । ...